Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Xasuuqa Ogaadeeniya oo laga xusay magaalada Johannesburg iyo Dalka Qatar
Maalinta Xasuuqa Ogaadeeniya oo laga xusay magaalada Johannesburg iyo Dalka Qatar
Waxaa si wayn looga xusay magaalada Johannesburg -Maalinta Xasuuqa Ogaadeeniya (Ogaden Massacre Day) – oo ku aadan 22/02/13, maalintaas oo ah maalintii ay kooxda Wayaanaha ee TPLF ka gaysateen gayiga Ogaadeeniya dhacdadii ugu xanuunka badnayd taasoo kadhacday magaalada Wardheer xarunta gobolka Doolo.
Shirkan baroor-diiqda ah waxaa daadihinayay gudoomiyaha faraca Gauteng mudane Yusuf Islam, iyadoo lagu furay wacdi diini ah oo ku sabsanaa Alle kacabsiga iyo hadafka shaqsiga muslimka ah uu leeyahay intuu noolyahay.
Ka dib waxaa goobta laga akhriyay taariikh kooban oo ku saabsan dhacdooyinkii Wardheer, Goday, Qalaafe, Qabri-dahare iyo Dhagaxbuur, oo intaba ay Wayaanaha TPLF ka gaysateen xasuuq wadareed iyo dooxato. Ujeedada TPLF ayaa ahaa in ay afka ooda kasaarto shacabka soomaalida ogaadeneiya oo ay dib uga laabtaan rabitaankoodii ahaa in shacabka afti laga qaado oo looga codeeyay baarlamaankii sida xorta ah ay u doorteen.
Shirkan ay jaaliyadda isugu timid ayaa ahaa mid xambaarsan murugo, oo dhamaanba uu isbadalay dareenka ka soo qaygalayaasha markii la xasuustay dhacdooyinkaa.
Waxaa shirla lagu qabtay xaafiiska jaaliyada ee faraca Gauteng ayaa sidoo kale lagu qorsheeyay sidii farucu uga gudbi lahaa hawlaha horyaala ayadoo isla goobtii lagu hawl qaybsaday.
Sidoo kale waxay Dhalinyarada OYSU-Qatar ku qabteen magaalada Doxa xalay oy taariikhda ahayd 27-02-13 xuska Maalinta Xasuuqa Ogaadeeniya. Munaasabadaa oy ka soo qayb galeen xubnaha OYSU ayaa wacdi diini ah kadib lagu daawanay filim ka tarjumayay dhibka isugu jira dilka, kufsiga, xadhiga iyo dhaca aan aabayeelka lahayn ee lagu hayo shacabka birimagaydada ah. Filimka ayaa shucuurtii daawadayaasha aad u badalay isla markaana kaga ilmaysiiyay.
Xoghayaha OSYU QATAR ayaa ka akhriyay madasha dhacdooyinkii naxdinta lahaa kuwii ugu waa waynaa ee soo mara shacabka Somalida Ogadeniya dhacdooyinkaas oo isugu jiray farxad iyo murugo.
Intaa kadib OYSU QATAR waxay ku balameen in naf iyo maalba ay u hurayaan halganka socda ee gumaysiga lagaga xoreynayo dalka hooyo.